နုတ်ထွက်စာကိုနမူနာ | USAHello ထံမှဂျော့ဘ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင်သည်သင်၏အလုပ်ထွက်ခွာနေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးနုတ်ထွက်စာကိုနမူနာလိုအပ်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်စာတစ်စောင်ရေးသားဖို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်စာတစ်စောင်ရေးသားဖို့အခြေခံအဖြစ်ဤနမူနာကိုသုံးနိုင်သည်, နှင့်ရက်စွဲများ, နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ. Download သို့မဟုတ်ကူးယူနမူနာနှင့်သင့်အခွအေနေကိုက်ညီဖို့စကားများကိုပြောင်းလဲရန်.
သူတို့ကိုသင်သင်ပြောပြရန်သင့်အလုပ်ရှင်တွေ့မြင်မီဤစာဖို့လိုအပ်ပြောင်းလဲမှုများသင့်ရဲ့အလုပ်ထွက်ခွာနေကြသည် Make. ထိုအခါကထွက် print ထုတ်ကာဘောပင်နှင့်အတူကလက်မှတ်ရေးထိုး. သငျသညျကထွက် print ထုတ်မပေးနိုင်လျှင်, လက်ဖြင့်ကူးယူခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုး.
လက်သင်အလုပ်စွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါပြီသောသူတို့အားပြောပြပြီးနောက်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဖို့စာတစ်စောင်. သငျသညျကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ပေးသေချာအောင်လုပ်ပါ’ အသိပေးစာ.
ငါကသင်၏နဲ့ငါ့အလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့ကိုအသိပေးရေးသားနေပါတယ် [ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်းက, သို့မဟုတ်ကဒီမှာကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ]. အကြှနျုပျ၏နောကျဆုံးသောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည် [လ, နေ့စှဲ, ခုနှစ်].
တစ်ဦးစကားလုံးစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်နုတ်ထွက်စာကို Download လုပ်ပါ (သင်က link ကို click လိုက်တဲ့အခါ, စာရွက်စာတမ်းကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ downloads, ဖိုင်တွဲကိုသွားပါလိမ့်မယ်။)
တစ်ဦး pdf အဖြစ်နုတ်ထွက်စာကို Download လုပ်ပါ